Lenovo News: fandefasana, finday, takelaka, faka ary bebe kokoa - Androidsis | Androidsis
Lenovo dia mpanamboatra sinoa iray izay mivarotra finday avo lenta sy tablette miaraka amin'ny Android ho toy ny rafitra miasa. Ny orinasa dia fantatra ihany koa amin'ny famokarana solosaina finday, anisan'ireo vokatra elektronika hafa. Ny marika toa ny ZUK sy Motorola dia ao anatin'ny vondrona Lenovo ankehitriny, ka izy ireo dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny tsenan'ny Android.
Ny telefaona Lenovo dia miavaka amin'ny sandan'ny vola be, zavatra iray mahatonga azy ireo ho safidy mahaliana ny mpanjifa. Eto ianao no hahita ny vaovao farany na ny hevitra momba ny telefaona Lenovo miaraka amin'ny Android ho rafitra fiasa.
Ny Lenovo Legion Phone Duel dia mahatratra ny tsena eoropeanina miaraka amina RAM 16 GB
ny Aaron Rivas hace 10 volana .
Nandray ny finday avo lenta finday vaovao i Eropa, izay tsy iza fa ny Legion Phone ...
Lenovo Tab P11 Pro, ilay takelaka vaovao misy fàfana 2K sy Snapdragon 730G
ny Aaron Rivas hace 11 volana .
Ny orinasa sinoa manana Motorola, Lenovo, dia nanangana tompon'andraikitra amin'ny takelaka vaovao indray, izay eo ambanin'ny ...
Ny Lenovo Legion Phone Duel dia ofisialy izao ary mampiasa ny Snapdragon 865 Plus sy ny efijery 144 Hz
Lenovo dia tsy marika fanta-daza amin'ny fanolorana finday avo lenta amin'ny indostria. Raha ny marina, mihoatra ny ...
Ny Lenovo Z5 Pro GT, finday voalohany manerantany miaraka amin'ny Snapdragon 855, dia mahazo Android 10 ihany amin'ny farany
Ny Snapdragon 855 no chipset avo lenta indrindra tamin'ny taona 2019 izay nambara tamin'ny faran'ny taona 2018. Ity…
Ny Lenovo Legion dia hanisy fiampangana haingana 90W
ny Rafa Rodríguez Ballesteros hace Taona 1 .
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia niresaka momba ny fanoloran-tenan'ny orinasa Lenovo ho an'ny smartphone finday iray izahay, ny Lenovo Legion….
Lenovo M10 Plus, ilay takelaka lehibe vaovao miankina amin'ny chipset Helio P22T an'ny Mediatek
Vao nahalala ny andian-tsarimihetsika vaovao an'ny Huawei izahay, izay misy ny trio P40 mahery, sy ny ...
Ny Lenovo A7 no finday vaovao izay mikasa ny hiroso amin'ny faritra ambany miaraka amin'ny Spreadtrum SoC
Lenovo dia mpanamboatra sinoa izay tsy mandefa smartphone matetika. Noho izany, ny katalaoginao dia somary ...
Lenovo dia efa miasa amin'ny telefaona lalao 5G eo ambanin'ny marika Legion
Lenovo dia te hiditra tanteraka amin'ny tsenan'ny smartphone amin'ny alàlan'ny fananganana modely vaovao dia ...
Lenovo M10 FHD REL no anaran'ny takelaka maranitra vaovao an'ny mpanamboatra izay azo alaina…
Hita fa voamarina ny Lenovo K10 ary toa fanovana anarana hafa an'ny Moto E6 Plus ilay izy
Lenovo K10 Note sy Lenovo K10 Plus series dia mety hahazo mpikambana vaovao ato ho ato. Ny antontan-taratasy fanamarinana ny ...
Lenovo S5 Pro vaovao: 6.3 panel FHD + tontonana, SD636 sy maro hafa
Lenovo dia handefa ny finday 5G voalohany miaraka amin'ny Snapdragon 855
Lenovo A5 sy Lenovo K5 Fanamarihana: ny afovoany vaovao an'ny marika
Ny Lenovo Z5 dia ofisialy. Fantaro ny fiasa sy ny miavaka azy!
Famaritana sy fiasa amin'ny Lenovo K5 vaovao sy K5 Play vaovao
Lenovo S5: ny afovoany vaovao an'ny marika sinoa
Lenovo K320t Fomba feno naseho
Lisitra ofisialin'ny terminal Lenovo izay havaozina amin'ny Android Lollipop